Ulwazi lomnikelo- iGalveston County Food Bank
Unokwenza iminikelo imbeko okanye inkumbulo yomntu.
Jonga umzekelo ongezantsi
Kwimemori / Imbeko yesatifikethi nceda ufake ulwazi kumamkeli kwicandelo lamagqabaza xa usenza umnikelo kwi-Intanethi. Isatifikethi se-hardcopy, kubandakanya igama lomamkeli kunye nedilesi yokuthumela. Isatifikethi sedigital, faka igama lomamkeli kunye nedilesi ye-imeyile.
Imibuzo okanye iinkxalabo, i-imeyile Dora@galvestoncountyfoodbank.org
Umntu ngamnye umnikelo wokutya wamkelwa kwindawo yethu yokugcina ephambili ekwi-624 4th Ave N, eTexas City, TX. 77590. NgoMvulo-Lwesihlanu ngeye-8 kusasa ukuya ngentsimbi yesi-3.
Bamba iDrive yokutya kunye neFund
Khuphela ulwazi lwePakethi Apha
Khuphela i-Kidz Pacz Eyona nto ifunwayo